SIDA LOO URURIYO ABUURKA MARIGOLD: GOORTA LA GOOSANAYO IYO SIDA LOO SAMEEYO SI SAX AH, IYO SIDOO KALE SHARAXAADDA IYO SAWIRADOODA, TALOOYIN KU SAABSAN KAYDINTA IYO ISTICMAALKA - SOOSAARKA DALAGGA
Kaydinta miisaaniyadda: sida loo soo ururiyo miraha marigold iyo ma iibsan?
Raashinka dukaanka ayaa ka buuxa bacaha quruxda leh ee miraha dhirta beerta. Laakiin inkastoo taasi, beeralay badani waxay doorbidaan inay si madax-bannaan u soo iibsadaan wax-beero. Dhibaatooyinka kala duwan waxay u heelan yihiin go'aankaas oo kale: damaanad qaadka biqilka wanaagsan, kaydinta lacag, iyo sidoo kale waxaa loo yaqaan si hubaal ah.
Qodobada qaarkood ma aha kuwo la fahmi karo, laakiin haddii ay ka hadlayso marigolds, ka dibna cadaynta lacagta ku badbaadisay ayaa kor ku soo baxaysa. Ubaxa waa mid aad u caan ah oo tirade miraha loo baahan yahay in lagu qurxiyo beertu waxay tegi kartaa boqollaal. Iska ilaali kharashyada aan loo baahneyn adoo ururinaya sanduuqyada beeraha ee beertaada ama ubaxyada.
Marigolds ama Tagetes - warshad cagaaran ah. Tani waxay ku dhalatay gobollada Mexico, si guul ah u degay waddammo badan oo dunida ah.
Mawduucyada ballaadhan waxaa lagu sharraxayaa qurxinta iyo qabsoomi la'aanta xaaladaha sii kordhaya. Ubax xiiso leh wuxuu si wanaagsan u koraa carrada saboolka ah wuxuuna awoodaa in uu hor istaago abaarta gaaban.
Kubadaha cagaaran ee cagaaran ayaa la jilciyay boqollaal dabiici ah oo cadceeda ah. Meter, casiir leh afkoda, oo lagu daboolay ubax, cabirka dabka shaah. Buulaha yaryar, rinjiyeynta xuduudaha sariiraha ubaxa ee tayada maroon. Tani waa dhamaantood ku saabsan marigolds, noocyo kala duwan oo kaas oo sii kordhaya sanad kasta. Baro wax badan oo ku saabsan noocyada marigold, oo ku saabsan sifooyinka beerahooda ee bannaanka u furan, iyo sidoo kale arki sharaxaad iyo sawir ubax halkan, iyo in arrintan wax ka akhriso noocyada dilka ah ee ubax this).
Hadda, waxaa jira ilaa lix nooc oo dhirta. Beeraha qudaarta ah waxay ku koraan marigold sariiraha ku xiga dalagyada beerta. Marigolds - ilaalin lagu kalsoonaan karo oo ka dhan ah aphids, nematodes, dirxiga ah ee Beetles May iyo cudurada cudurada fungal.
Muxuu abuurka caleenta u eg yahay?
Tagetesy Bloom ka bilowdaan bilowga Juun ilaa bilawga ah ee dhaxan ugu horeysay. Inta lagu jiro xagaaga, waxaad ka arki kartaa dhirta la mid ah gobollada, sanduuqyada la qalajiyey si adag u cufan leh dhir badan oo dotted abuur ah. Eeg sawirrada marigolds, iyo sidoo kale in la ogaado sababta ay marmarka qaarkood aysan rabin inay buriyaan burooyinkeeda halkan.
Abuurka marigolds wuxuu u eg yahay cirbadaha madow ee madow oo leh calaamad cad. Noocyada qaarkood waxay leeyihiin hooska madow ee madow. Dhererkooda iyo miisaankoodu waxay ku xiran yihiin cabbirka ubaxa asalka ah. Tusaale ahaan, hal gram oo ah ubax weyn, qumman oo qumman ayaa ku jira saddex boqol oo miraha, iyo boorso ah noocyo khafiif ah oo soo kordhay oo miisaankoodu isku mid yahay, waxaad tirin kartaa illaa toddoba boqol oo qaybood (oo ku saabsan sifooyinka daryeesha marigolds gaaban halkan).
Eeg sawirrada miraha marigold:
Sidee si sax ah u isugu dhafan?
Marigolds sii kordhaya meel qorrax leh ee ciidda bacrin ah, ma la silciyo abaarta, abuur abuur miraha.
Waa muhiim! Tagetis, beeray abuuray iibsaday abuurka F1, ma aha mid ku habboon doorka dhirta uterine. Wuxuu siin doonaa farcan, midab aan la saadaalin Karin iyo dherer.
Haddii uu naqshadeeye qorshaynayo inuu qurxiyo sariirta ubax leh xuduud hoose ee ubaxyada, ka dibna Ma aha lagama maarmaan in la ururiyo sanduuqyada sanduuqa ee meelaha meelaha isku dar ah ee koray. Noocyo kala duwan si fudud pereopilyatsya iyo ma siin qalab beerto nadiif ah.
Goorma ayay ka fiicantahay soo goosashada?
Xilliga kuleylka qoyaanku wuxuu noqon karaa mid qoyan. Waqtiga ugu fiican ee la ururiyo - maalmo qorrax leh oo bilawga dayrta. Waqtigaan sanadka, miraha si fiican u bislaadaan oo si sahlan loo kala sooco.
Uruurinta abuurka wuxuu ka kooban yahay dhowr talaabo oo fudud:
Dooro warshad wanaagsan oo si taxadar leh u gooyaa asalka.
Faafi xaashi weyn oo warqad iftiin ah oo rux duur joog ah.
Ururi abuurka abuuray bislaaday iyo meel si ay ugu qallalaan meel mugdi ah, oo aan lahayn meel la'aan.
Ha ku qalajinin alaabada wax lagu beero kariyaha iyo qalabka kale ee kululaynta.
Ku rid bacaha qallalan ee warqadaha. Haddii ubax mustaqbalka u ogolaanayo isku dar ah dhirta dhererka kala duwan iyo midabyada ubaxa, ka dibna waxaad ku sameyn kartaa xirmo guud.
Samee qoraallo muujinaya kala duwanaanta, astaamaha ugu muhiimsan ee warshadda iyo taariikhda ururinta.
Waxaa jira xaalado marka qoryaha badeecada ee marigolds uusan ku korin beertaada, oo ma jirto siyaabo aad u sugto sanduuqyada abuurka si buuxda u bislaadaan. Xaaladdan oo kale, soo qaado xayawaanka leh ubaxyada ugu caajis badan oo ku dhaji daaqada ka fog ilayska qorraxda tooska ah. Heerkulka dabiiciga ah ee lagu mastaafurinayo + 23-25 ​​digrii. Marka ay bilaabaan inay si fudud u kala soocaan xayeysiiska, qalaji oo kaydi.
Ha ku keydin sanduuqyada bacaha, bacaha balaastigga ah ama baakooyinka kale ee la midka ah kaydinta. Seeds waa inay neefsadaan.
Heerkulka kaydinta + 12-15 digrii.
Ka fogow abuurka hawada diiran, hawada qoyan. Xaaladda ugu weyn ee ilaalinta biqilka waa qoyaan yar qolka. Sidaa darteed, shelf ama armaajada jikada maaha meel ku habboon bacaha miraha.
Ha iskaga ilaalin amniga wax lagu beerto:
qumman (Afrika) iyo noocyada diidmada (Faransiiska) ayaa weli ah kuwo mudan ilaa afar sano;
ganaaxa (Mexico) - illaa lix sano.
Suurtagal ma tahay in guriga lagu koro?
Abuurka la ururiyey waxaa loo isticmaali karaa ma aha oo kaliya beeritaanka guga ee ubaxyada. Marigolds si fiican bay u koraan gudaha oo ay ku farxaan isha iyo ubaxyada dhalaalaya bilaha jiilaalka.
Akhriso wax dheeraad ah oo ku saabsan sida loo daryeelo marigolds, iyo sidoo kale sida loo abuuro xaalado guriga si ay u kobcaan guul iyo ubax.
In floriculture indoor isticmaalaan awoodda dhirta kuwan si ay ula dagaallanto cayayaanka phytophagi.
Caawin Faafinta biyaha ee abuurka Tagetes ayaa ku dhejin kara caarada caarada, qulqulo yaryar ah oo ka soo liicaysa lafaha iyo shubanku, iyo sidoo kale jeermisyada carrada.
Si aad u sameysid waxaad u baahan tahay:
Qaado qaado oo ah walxo cayriin ah.
Shub dhalada biyo karkaraya.
Ha u istaag meel diiran 3-4 saacadood.
Abuurka Marigold waa hodan ku salaysan saliidaha lagama maarmaanka ah ee ku dhaqma habka jirka aadanaha. Tani waxay kuu oggolaaneysaa inaad u isticmaasho diyaarinta isku dhafan udgoon oo loogu talagalay bacaha iyo barkadaha dhirta. Waxay yareeyaan walaaca, walaaca iyo walaaca. In si faahfaahsan oo ku saabsan guryaha bogsiinta iyo contraindications in la isticmaalo marigolds, waxaan ku sharaxnay qodobkan, iyo ku saabsan sifooyinka isticmaalka warshad this ee daawada dhaqanka iyo karinta, akhriyaan waxeena.
Sanduuqyada qallalan ee lagu buuxiyo abuurka waa alaab aad u fiican oo saliid lagu kariyo oo lagu nasto. Marka aad guriga joogtid, way fududahay inaad diyaariso walaxdan faa'iido leh:
Mishiinka miraha abuuray ku shub 200 garaam oo ah hadhuudh ama saliid saytuun ah.
Ku adkeyso 15 maalmood meel gudcur ah.
Sifee maro balaastik ah.
Ku shub dhalada muraayad mugdi ah oo lagu keydiyo.
Uruurinta miraha ubaxyada aad jeceshahay waa khibrad faa'iido iyo farxad leh. Waxay ka dhigeysaa suurtogalnimada dayrta in mar kale la hadasho dhirta beerta, sameyso qorshe xilli-xiga iyo keydso lacag iibsashada xayawaanka cagaaran ee cusub. Si fiican loo goostay oo loo kaydiyey abuurka waa dammaanad lagu kalsoonaan karo oo ah quruxda sariiraha ubaxaaga mustaqbalka.
Ilyich F1 "yaanyo fara badan": sharaxaadda noocyo aan qabyo ahayn
Faa'iidooyinka iyo waxyeellooyinka lafdhabarta
Kalanchoe Pinnate: sida loo daryeelo guri guri
Acacia - waa noocyada iyo qaababka ay u shaqeeyaan
Si loogu magacaabo magac - tufaax sare "Hero"
Gawaarida beerta (beerka agagaarka Apodemus) waa jiir yar, oo leh jilib jiirarka beerta. Xayawaankuna waa yar yahay (10-12 cm), jaakadiisu waa bunni madow oo leh dabeecad madow ama mugdi madow ah oo ku taalla godka. Daboolka caarada beerta waa mid gaaban, oo ka gaaban dhererka jirka. Guryaha waa mid aad u ballaaran - Bartamaha iyo Bariga Yurub, koonfurta galbeedka Siberia, Primorye. Read More
Saladh sahlan oo dhadhan leh ka soo kaabajka Chinese iyo digir qasacadaysan
Ma jirtaa baranbaro? Ma leeyihiin baalalba? Noocyada nooca u duuli kara